Xog:-qorshaha safarka uu dhuusamreb uu ku jogo taliye ku-xigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliya | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Xog:-qorshaha safarka uu dhuusamreb uu ku jogo taliye ku-xigeenka Ciidanka Booliska...
Xog:-qorshaha safarka uu dhuusamreb uu ku jogo taliye ku-xigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliya
Wafdi Saraakiil ah oo uu hogaaminayo Taliye ku-xigeenka Koowaad ee ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa galabta gaaray magaalada Dhusamareb ee xarunta Dowlad goboleedka Galmudug.
Wafdiga ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha ku soo dhoweeyey Saraakiil iyo ciidamo Boolis ah iyo qeybaha kale Bulshada magaalada.
Taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka Booliska Soomaalyeed Sareeye guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi ayaa muddada uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb, wuxuu kulamo la qaadan doono madaxda Galmudug iyo taliska ciidanka Booliska maamulkaas oo uu kala hadli doono sidii loo horumarin lahaa Booliska iyo tayeyntooda.
Previous articleWararkii ugu danbeyay dagaal cuLus oo mar kle dib uga qarxay Deeganka…..
Next articleAkhriso sh shaakir & Macalin Maxamud oo arimo xasaasi ah isku khilaafay
Qaar ka mid ah Culimada Ahlusuno Guriceel oo Shacabka magaladaas ugu baaqay inay Fadhiga ka kacaan. ogoow sababta
Qaar ka mid ah Culimada Ahlusuno Guriceel oo Shacabka magaladaas ugu...